Melite ma ọ bụ mee uche gị n'efu | Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
Ị nọ ebe a: Home > Zọ ndị a ga-esi nye onyinye > Hapụ Onyinye n’Uche Gị > Melite ma ọ bụ mee uche gị n’efu
Bromley, Lewisham & Greenwich Mind esonyela na onye ọka iwu mpaghara yana onye na-eweta ntanetị ga-enyere gị aka ịme ma ọ bụ gbanwee uche gị n'efu. Enweghị ọrụ ịhapụ anyị ihe, agbanyeghị ọtụtụ ndị na-eji ọrụ a ahọrọ itinye onyinye na uche ha iji kwado ọrụ anyị na mpaghara na ndị nwere nsogbu.
Onyinye sitere na uche na-eme nnukwu ọrụ na ọrụ anyị nwere ike iru. Inamke n̄kpọ m̀m large akamba m̀m or ekpri, enọ fo ọyọbọ utịp ke nsinsi.
Free ga online na Guardian Angel
Anyị maara na ọ gaghị ekwe omume mgbe niile ma ọ bụ dị mfe maka ndị mmadụ ịga nhọpụta nke onye ọka iwu ihu na ihu, ọkachasị n'oge ndị a na-ejighị n'aka na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ya mere, anyị emeela mmekọrịta na Guardian Angel iji nye uche dị mfe n'ịntanetị n'efu *.
Ọ dị ngwa ma dịkwa mfe - ọ ga - ewe naanị nkeji iri na ise!
Ọ dị mma - Guardian Angel Wills bụ ndị ọka iwu na-ejide ma na-enyocha ya.
Ọ bụ n'efu. Tinye koodu ndepụta: BLGMIND-FREE-20 na ndenye ego
Enwere ike ime nke a ihu na ihu, ma ọ bụ na ekwentị ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Mee Nnwere Onwe I Nwere Onlinentanetị Ugbu a
Free na onye ọka iwu mpaghara
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịme onye ọkaiwu nke ime obodo gị n’onwe gị ma ọ bụ n’ekwentị, onye anyị na ya nọ na Charity nke Afọ, Grant Saw, nke dị n’obodo anyị ji obi ha niile na-enye ọrụ ịde ederede. Jiri njikọ email dị n'okpuru iji debanye aha na Grant Saw ma nata nkọwa ndị ọzọ, na-ehota BLGMind.
Nye Nduzi Uche
* T & C na-etinye. Naanị ọnụ ọgụgụ ole na ole nke ikike ime nhọrọ dị. Onyinye a bụ maka Nhọrọ Nhazi Free. Nwere ike ibute ụgwọ ọzọ ma ọ bụrụ na uche gị dị mgbagwoju anya karịa biko hụ na ị ga-enyocha tupu ịga n'ihu na uche gị.
Nweta Ntuziaka Nwere Onwe Anyị